Kooxda Manchester United oo la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaacday Burnley – Gool FM
(Burnley) 12 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaaceen Burnley.
Man United ayaa qeybta hore awoodi weysay in la kala nasto iyadoo goolal ku hoggaaminaysa ciyaarta, maadaama ay doonaysay inay hoggaanka u qabato horyaalka caawa.
Luke Shaw ayaa nasiib ku lahaa inuu garoonka ugu sii jiro Man United, waxaana uu muteysan karay kaarka casaanka ah 32’daqiiqo kaddib markii uu si adag taakal ugu qabtay mid ka mid ah xiddigaha Burnely, laakiin waxaa Shaw loo taagay kaarka digniinta kaddib markii la soo daawaday VAR.
Man United ayaa hoggaanka u qabtay ciyaarta, waxaana karoos uu soo qaaday Luke Shaw, madax ku dhaliyey Harry Maguire, balse garsooraha ciyaarta ayaa u sheegay inuu kala tuuray mid ka mid daafacyada Burnley ka hor inta uusan goolka dhalin, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man United ayaa gool la timid waxaana u dhaliyey 71’daqiiqo Paul Pogba, kaddib markii uu kubadda ku dharbaaxay shabaqa markii uu ka faa’iideystay karoos qurux badan oo uu soo qaaday Marcus Rashford, kooxda martida ahayd ee Man Utd ayaana 1-0 ku qabtay hoggaanka ciyaarta.
Kooxda Burnley ayaa dhowr fursadood heshay oo ay ciyaarta barbaro kaga dhigtay balse ma dhicin inay shabaqa soo taabtaan, si la mid ah Man United oo ay soo mareen dhowr fursadood oo ay hoggaanka ciyaarta ku dheereysan kartay, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 ay ku adkaatay kooxda Manchester United.
Macallin Ole kooxda uu hoggaamiyo ee Man United ayaa sidaas kula wareegtay caawa hoggaanka horyaalka Premier League, waxaana ay Liverpool kaga qabteen saddex dhibcood, kulankooda soo aaddana waxa ay Reds ku booqanayaan garoonkooda Anfield.